Izinkokhelo | Thenga i-Blue, Red, Violet, Green Laser Pointer - i-Lasers-Pointers.com
I-Debit / Ikhadi Lesikweletu
Ungakhokha ngqo ngedebithi yakho noma ikhadi lesikweletu ngokusebenzisa ipulatifomu yethu yokukhokha, i-100% iphephile, asinakho ukufinyelela kwimininingwane yekhadi lakho.
Ungayikhetha indlela yokufaka inkokhelo yokufaka ukungena kwi-akhawunti yethu ye-BBVA noma ye-ABANCA. Lapho ukukhokha sekwenziwe, sithumele ikhophi ku- info@lasers-pointers.com. Ungakhohlwa ukucacisa igama lakho nesibongo ngaphezulu kwenombolo ye-oda.
I-Apple Pay / Google Pay
Uma usunayo i-iOS noma i-Android idivayisi ungakhokha ngokushesha futhi kalula.